Ukuba ngokwenene awufuni ukuya ocansini, linda ukwesaba. Kukho izinto ezininzi ebomini ezithintela umnqweno wethu wesini, xa thina ngokwethu asikrokreli ngako. Kufuneka nje ukwazi "intshaba ngomntu", ngoko kuya kuba lula ukujamelana neengxaki ebhedini. Ngezantsi zizinto eziphambili ezinciphisa umnqweno wesini.
1. Izonka ezimhlophe
Uyakumangalisa, kodwa i-carbohydrate equle kwi-baking ngokukhawuleza inqanda umnqweno wesini. Oku kungenxa yokuba iswekile ixakeke ngokukhawuleza, kwaye umzimba uphelelwe ukungabi namandla. Kwaye ngaphandle kwamandla kunye nesondo akunakwenzeka. Ukongezelela, i-carbohydrate engaphezulu iholele kwisisindo sokubanda ngokweqile, oku kunciphisa umnqweno. Nama-carbohydrate amanqanaba aphantsi e-testosterone kumadoda kunye nokujikeleza kwegazi. Sisiphi isondo esifanelekileyo esinokuthetha ngayo ...
2. Ezinye iipilisi zokulawula ukuzalwa
Ngamanye amaxesha ziqukethe i-pseudoephedrine, eyenza kakhulu ukunciphisa i-libido. Izizathu zonyango ezichanekileyo zalo mcimbi aziwazanga, kodwa ukuthatha izidakamizwa kunokwehla okunamandla kwimisebenzi yesondo ngokubanzi.
3. Ukunqongophala kwezitye
Ubutyebi obunjalo bubangela ukuhla kwezinga lokuhamba kwegazi kunye nokubonakala kwesimo sokulala. Xa uhlalutya inqanaba lesinyithi emzimbeni, unciphisa inyama ebomvu, iimbotyi, i-nut kunye nee-oysters ekudleni.
4. Iziyobisi ukwenzela ukunciphisa uxinzelelo lwegazi
Banciphisa izinga lentliziyo kunye nokujikeleza kwegazi. Ngokuqinisekileyo, ukunyuka kwengcinezelo akuyona into ekhuthazayo yomnqweno, kodwa uxinzelelo lwegazi oluphantsi luya kunciphisa i-libido kwaye ngokucacileyo.
6. Utywala obuphantsi kotywala
Kule meko, sithetha itoni - isiselo esinequinine. Le nkunkuma inako ukunciphisa izinga le-testosterone kwaye lichaphazela umgangatho wesilisa kumadoda. Ukusetyenziswa rhoqo kwezi ziphuzo akunakukunciphisa kuphela umnqweno wesini, kodwa kubangela nezinye iingxaki zempilo. Kwamazwe amaninzi athuthukile, le mveliso sele isavumelekile ukuthengiswa.
7. Ukulahleka kokunciphisa umzimba
Ukuba uyazixhaphaza ngesidlo, ungamangalisi ukuba awufuni ukulala ngesondo. Ukulahlekelwa kwesisindo kunokuchaphazela kakhulu amahomoni kunye nesifiso sesondo. Ukuba umntu ulahlekelwa ngaphezu kwe-10% yesisindo ngexesha elifutshane, umzimba ufumana uphawu lokuba umntu ulambile indlala, uvakalelwa ukungabikho kwezondlo. Ngengqiqo yayiquka inkqubo "akukho ukuqhubeka kweengcambu", ekubeni ukuzila kuba ngumzuzu ongathandekiyo kakhulu wokuzalwa kwabantwana. Kodwa, ngokugqithiseleyo, abaninzi abantu banqwenela ukunciphisa umzimba ukuze bajonge bhetele kwaye bakhangele ngakumbi. Kodwa xa kwenzeka, bayaqonda ukuba abafuni ukulala ngesondo.
Izinto eziphambili ezichaphazela umnqweno wesondo zi-morphine kunye ne-codeine-izinto eziphazamisa i-hypothalamus. Kananjalo yena ulawula izinga le-hormone, oko kukuthi, kukhokelela ekukhululeni i-hormone kwi-pituitary gland, ukunciphisa i-libido.
9. I-aphrodisiacs zemifuno
Ukuba zendalo - akuthethi ukuba zilungile kwimpilo. Uninzi lwazo luveliswa kumazwe aseAsia kwiimeko ezimbi, kwaye sinokuziva sibi emva kokufumana okokuqala. Abanye ngokubanzi baneempembelelo ezahlukeneyo, ukuba bangavelwanga kakuhle. Yilumkele ngokuvuselela ukukhanga - unokuphinda unqumle nayiphi na iminqweno.
10. Isifo sikashukela
Ichaphazela inkqubo yesantya kwaye ibangela ukukhathazeka kwengqondo ekuthintekeni kwabo bahluphekileyo kwesi sifo. Ukongeza, abantu abaninzi abanesifo sikashukela bavalelwa yi-erectile dysfunction.
11. Isidlo sothando
Okumangalisa ngokwaneleyo, kodwa kukho phambi kocansi - kungeyona nto efanelekileyo. Ukuba ufuna isondo kunye nothando, ngoko yonke into esebenzayo kufuneka yenziwe ngaphambi kokutya. Inkcazo ilula. Emva kwesidlo esikhulu, umzimba ugxininise ekuguleni, siyalala kwaye asifuni nto ngaphandle kokuphumla.
12. Ukukhathazeka ngokukhulelwa
Xa isibini sizama ukufumana umntwana, isondo asiyi kuba semgangathweni. Bobabini abalingani baya kuziva bexinezelekile, kwaye isondo siya kuba ngumatshini ngakumbi kunomdla. Ngokuqinisekileyo, ukungabikho kwabantwana kuyinkathazo engundoqo yengqondo. Kodwa kufuneka uzame ukuzidibanisa nobudlelwane obusondeleyo, ungacingi rhoqo malunga nokuba lukhulu kangakanani lo wesondo luya kusebenza.
13. Ezinye izidandlululo
Into eyingozi kakhulu kule meko ingumgubo weProzac. Ezinye ezininzi iziyobisi ziyanciphisa umnqweno. Ukongezelela koko, zichazwe kulabo abahluphekayo nge-ejaculation engaphambi kwesikhathi. Ngoko umphumo wabo ubonakala-ukuqinisekisa zonke iimeko. Kwaye ngokwemigangatho yesondo, naye.
Le ndoda ngokusa kusasa emva kwesondo
Inkqubo yezesondo zoqobo
Indlela yokugcina ulwahlulo kwizesondo?
Iindawo zokuqala zesondo
Ubomi obusondeleyo bomfazi
Izibonelelo ezi-5 zesondo ngobusuku obunye
Isimo sezulu eMoscow naseMoscow ngoNovemba 2017 - isibikezelo esilungileyo esivela kwiziko le-Hydrometeorological for the region
Ukupheka kwezitya eziphekwe kwi-oven
Izakhiwo zonyango zetyuwa yokutya
Iingcebiso zokuLondolozwa kweMpilo yoLwazi lweNtombi
Inyanga yesibhozo yokuphuhlisa abantwana
Indlela yokufaka ukutyhulwa, ukwenzela ukuba ngaphandle komtshato
Amaqhinga okutya "okungaqondakali": indlela yokunciphisa umzimba ngaphandle kokuphazamiseka nokuxinezeleka
Izityalo zonyango, unyango lweeyeza zonyango